Resaky ny mpitsimpona akotry : kabary nahazo tehaka tena avy amin’ny fo | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : kabary nahazo tehaka tena avy amin’ny fo
Vory lanona ny vahoaka, tomefy ny sehatra Antsonjombe. Raha tonga ny manam-pahefana tsy nirefodrefotra ny tehaka fandraisana azy, maloka ny tarehin’ny olona. Teny midina hentitra ny fomba famporisihina nataon’ny Ministera mikasika ny filàna ny fahatongavan’
ny raiamandrenin’ny mpianatra hanatevin-daharana eny amin’ny lanonana fizarana “kit-scolaire”. Montotra noho ny fiverenan’ny baikobaiko sy jadona toy izany ny maro. Miala tsiny raha tsy marisika amin’ny fanaovana rodobe ho fampisehoana hafaliana na amin’ny anaran’ny fiatsarambelatsihy fotsiny aza. Ny mpanohitra isan-tsokajiny efa nanisy sira avokoa teo amin’ny fanasoketana mikasika an’ity lalonana ity izay voatsipaka ho tsy manana antony afa-tsy ny mikasika fanararaotana ny tranga misy toy ny fampideraderana ny fahalalahan-tanàna eo amin’ny fanampiana entina ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny mahantra. Nefa moa tsy mahasakana ny fisian’ny fanendrikendrehana milaza ny fitaizana ny fahantrana ataon’ny fitondrana.
Rehefa tonga ny fotoanan’ny kabary ka nandray fitenenana ny tompom-pahefana tampony dia tsy nisalasala fa nilaza mivantana fa tsy volany manokana fa volam-panjakana no nividianana an’ireto fitaovana zaraina ireto. Mpanolotra fotsiny amin’ny anaran’ny fanjakana hono ny tenany fa tsy izy no mpanome. Taitra ny vahoaka naheno an’izany fanetren-tena tsy mahazatra ny sofina izany. Nisalasala kely dia niara-nientana daholo ny mpanatrika nanambatra tehaka mirefodrefotra…
Vazivazy na nofinofy re izany. Aiza amin’izao andro izao no hisy mpilalao pôlitika hahafehy tena tsy hieboebo hanararaotra zava-misy ? Ny tsy misy aza foronina ahafahana hisarihan-damba andravahana ny tena na amin’ny rariny na tsia. Tsy mety ho tonga saina izy ireo fa ny fitapitaka tsy mandaitra ary hain’ny olona foana ny mitsikilo ny afenina ambadiky ny fanaovana fanjavozavoana. Niova ny vahoaka, ny fanaovana mangarahara ny fiovana andrasany. Na inona na inona atao ho fandrebirebena ny sain’
ny vahoaka na hoatrinona na hoatrinona atolotra ividianana ny fanahiny dia tsy ferana ny fisehoan’ny vokatra tsy nampoizina raha tonga ny fotoana anaovana ny fifidianana.